Iindaba -I-Xinhua News Agency intatheli kwi-Chenguang biology
Intatheli ye-Xinhua News Agency yintatheli yeChenguang
Nge-8 kaDisemba, iQuzhou yayibanda ingakumbi kwixesha lekhephu elinzima. Malunga ne-5 ngokuhlwa, u-Chen Zhonghua, usekela-mhleli oyintloko we-Hebei Branch ye-Xinhua news agency, u-Wang Min, umlawuli we-Ofisi yoMphathiswa Wezemicimbi yezoqoqosho, u-Yan Qilei, usekela mlawuli we-Ofisi yoMphathiswa Wezemicimbi yezoqoqosho, kunye nabanye abantu abahlanu benze into ekhethekileyo. Uhambo olusuka eShijiazhuang luye kwi-biology yaseChenguang kudliwanondlebe noLu Qingguo, umphathi jikelele we-Hebei "inguqu kumashishini angamawaka alishumi".
Kwigumbi lesine lenkomfa yeChenguang yenkampani yeqela lebhayoloji, iindwendwe kunye neendwendwe bahlala phantsi. Emva kokubukela umboniso bhanyabhanya weChenguang, u-Chen Zhonghua wabonisa uncumo ebusweni bakhe obugciniweyo. Ehamba noLu Qingguo, u-Chen Zhonghua wangena kwiholo yomboniso. U-Lu Qingguo wazise imeko ngokubanzi, ikhosi yophuhliso, ukuhanjiswa kweemveliso kunye neziseko zempahla eluhlaza, kunye nesikhundla kwishishini lebhayoloji yaseChenguang. Phambi kokuhanjiswa kwepaneli yenkxaso-mali, xa uLu Qingguo wazisa ukuba i-Chenguang biological ithenge ngaphezulu kwe-100000 mu yomhlaba e-Zambia njengesiseko sezinto ezingafunekiyo zokwenza "ivili lokugcina" kuphuhliso lwekamva lenkampani, u-Chen Zhonghua waphinda wancoma: "umbono ! Unemveliso yezixhobo zakho. Unamalungelo akho epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwinkqubo, kubuchwephesha nakwizixhobo. Akekho omnye umntu onokufunda kwaye akubambe. Ukwakha isiseko sempahla eluhlaza eAfrika kukwalungiselela umhla wemvula. Kukugcina ubeko lokuqala lwehlabathi kwikamva. ”
“Iimveliso esizivelisayo ngoku zithengiselwa e-United States njengezinto ezingavunyelwanga (iimveliso zokhathalelo lwempilo), emva koko zifakwe kwiifomsile e-United States zaze zathengiselwa i-China. Sizithengisa nge-yuan enye, kwaye sizithenga kwakhona e-United States nge-100 yuan. Ucinga ukuba singalahleka? ” U-Lu Qingguo uqhubeke wathi: “masimatshele singene kwimveliso yezempilo enkulu yanamhlanje yeemveliso zokhathalelo lwempilo kunye namayeza emveli amaTshayina, siyenze ibe ziimveliso ezingapheliyo, ukuze abantu abaqhelekileyo bakwazi ukuyitya. Iziphumo zilungile kwaye azibizi mali ininzi. ” U-Chen Zhonghua uwathathile la mazwi wathi, "Ngale ndlela, akufuneki siye phesheya siyokurisayikilisha!"
Bobabini bacinga ukuba lixesha elifanelekileyo lokuba i-Chenguang bio yenze ukutya kwezempilo. Kwiminyaka eli-10 okanye engama-20 ezayo, inqanaba lokusetyenziswa kwabantu liya kunyuka, ulwazi lwabo ngempilo luya kuphuculwa, kwaye baya kuba nokuqonda okungcono kweempawu zaseTshayina. Ngelo xesha, iya kuba yendalo kwinkampani ukuba ibe nkulu kwaye yomelele.
U-Lu Qingguo wazise iimveliso zenkampani kwiintatheli nganye nganye, ezenza ukuba iintatheli zibe ntsha kwaye zintsha. U-Chen Zhonghua uthe, "bendicinga ukuba ngumenzi wezinto zokubhala." U-Lu Qingguo uphendule ehlekisa wathi: "kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo, senza izixhobo zekhompyutha." Esalatha kwi-plaque “yeziko lobuchwephesha elaziwa njengelizwe” eludongeni, uthe: “sikalwe njengobalaseleyo phakathi kwamaziko obuchwephesha angaphezulu kwe-1000 e-China, kwaye zininzi kuphela ezigqwesileyo, kubandakanya neHuawei, ZTE, UJan Qilei, osoloko eqhuba iintlanganiso zekomiti yeQela yephondo kunye norhulumente wephondo, uthe kuLu Qingguo, “Irhuluneli uXu Qin ubekhe wakubhengezela i-Chenguang kule minyaka mibini idlulileyo. Nokuba incinci kangakanani na le ntlanganiso, uthi, “Owu! Khange ndilindele ukuba iQuzhou, indawo enjalo yezolimo, ibingayi kuba neentshatsheli ezingabonakaliyo!